China Acryli Convex Mirror ụlọ ọrụ na suppliers | Donghua
Nchekwa Convex na Enyo Nche, Okporo Trazọ Okporo Conzọ Convex
A convex enyo bụ ihe ntụgharị ihu na-atụgharị (ma ọ bụ ihu ọ bụla na-egosipụta nke a kpụrụ n'akụkụ nke okirikiri) nke akụkụ ya na-agbapụta ihu na isi iyi nke ìhè. Ọ na-egosiputa onyogho dị obosara n’ogo belatara iji gbatịa echiche iji nyere aka nwekwuo ọhụhụ n’ọtụtụ ebe maka nchekwa ma ọ bụ ngwa nyocha na nyocha nke ọma. DHUA na-enye enyo ngosipụta nke kacha mma nke na-enye ntụgharị nlegharị anya kachasị mma maka isi ike ịhụ mpaghara dị anya. A na-arụpụta enyo ndị a site na 100% na-amaghị nwoke, nyocha anya acrylic na-eme ka arụmọrụ na arụmọrụ dị iche iche.
Acryli Convex Mirror, Blind Site Mezighi ezi, Rearview Convex Akụkụ Mirror
Acrylic Convex Mirror maka ntụpọ ìsì, nchekwa ụlọ ahịa, nlele ụlọ nkwakọba ihe, ele anya ụgbọala na ndị ọzọ, enyo okirikiri okirikiri maka ojiji nkeonwe ma ọ bụ nke ụlọ ọrụ - nyocha ndị na-enyocha ọhụụ, na-enye ọhụụ kachasị elu mgbe etinyere na nkuku ma ọ bụ na-emechi anya, ha na-enyere aka igbochi ohi na iwepụ ihe ize ndụ nke ebe ìsì na ebe ndị dị ize ndụ.
Azụ nwa Baby · Ngosipụta doro anya na-ahụ maka nchekwa mkpuchi nwa maka ihu ihu nwa ọdụ ụgbọ ala.
Ji achọ acryli Convex Wall, Anti-Theft Mirror / Convex Wall Mirror
DHUA nke gosipụtara enyo doro anya maka ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí na nha na ụdị dịgasị iche iche maka nchekwa, nchekwa, nyocha na ọhụụ ọzọ-ọtụtụ ngwa yana ihe ịchọ mma nka.
Ugboro abụọ ejiri concave / convex enyo
DHUA na-enye enyo abụọ a na-agbanyeghị aka / convex plastic enyo nwere ihe nkiri mkpuchi. Igwe enyo a dị elu dị mma maka ngwa ụmụ akwụkwọ na agụmakwụkwọ. Studentsmụ akwụkwọ nwere ike iji enyo plastik ndị a na-enweghị ike ịkọwapụ iji gosipụta ma ghọta ụdịdị, echiche, na usoro. Ga-enweta ngwugwu enyo 1 x, tinyere 10 x enyo ihu abụọ concave / concave, nke ọ bụla tụrụ 10cm x 10cm.
Aha ngwaahịa Enyo Convex, Igwe Nche, Enyo Igwe Blind, Igwe Anya n’azụ Side
Ihe enyo Nwa agbọghọ PMMA
Agba Mirror Clear ma ọ bụ acha
Dayameta 200 ~ 1000 mm
Nlele Angle 160 ogo
Udi Gburugburu, akụkụ anọ
Akwado Eyi mkpuchi azụ, hardboard, iko eriri
Ngwa Nche na nchekwa, onyunyo, okporo ụzọ, ịchọ mma, agụmakwụkwọ ect.
nwa nchekwa mirror
kpuru ìsì ntụpọ
concave na convex enyo
convex mirror ụgbọ ala
convex mirror n'èzí
inogide convex mirror
plastic convex enyo
okporo ụzọ convex mirror